အမှိုက်ပုံရှေ့မှာတဲထိုးပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် စိတ်ထဲဝမ်းနည်းရတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ .... - Thutasone
အမှိုက်ပုံရှေ့မှာတဲထိုးပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် စိတ်ထဲဝမ်းနည်းရတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ ….
အမှိုက်ပုံရှေ့မှာတဲထိုးပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီး မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် စိတ်ထဲဝမ်းနည်းရတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
မင်းသမီးချောလေး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ခိုင်နှင်းဝေပရဟိတအသင်းကို တည်ထောင်ပြီး (၇)ရက်သားသမီးအလှူရှင်တွေနဲ့အတူတူ အလှူအတန်းတွေကို ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေက လက်ရှိမှာလည်း စားဝတ်နေရေးခက်ခဲကြပ်တည်းနေတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားမိသားစုတွေဆီ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီး လှူဒါန်းထောက်ပံ့မှုတွေကို ပြုလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေက အမှိုက်ပုံရှေ့မှာ တဲထိုးပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့သူတွေကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ပြီး သူမမြင်တွေ့ခံစားရသမျှကို အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။
“ယနေ့ မြောက်ဒဂုံ ထားဝယ်ချောင် အမှိုက်ပုံအနီးရှိ ချို့တဲ့သောသူများအား မီးဖိုချောင်သုံး စားသောက်ကုန်များနှင့် မိုးတွင်းအသုံးပြုရန် ထီး ၊ ဦးထုပ်နှင့် အကျီများ အပြင် ကလေးငယ်များအတွက် ကလေးအကျီများပါ သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်
သွားလှူဒါန်းဖြစ်တဲ့ အချိန် ခဏလေးမှာတောင် အနံ့အသက်ဆိုးတွေကြောင့် ကျမတို့တွေအသက်ရှုကျပ်နေခဲ့ရတာ တကယ်တမ်း အဲ့အမှိုက်ပုံရှေ့မှာ ရွက်ဖျင်တဲလေးထိုးပြီး ရှင်သန်နေထိုင်ရတဲ့ လူတွေ ဘယ်လိုတွေများ နေထိုင်နေကြရမလဲ”
“ကျွန်မ မစဉ်းစားနိုင်လောက်အောင် စိတ်ထဲ ဝမ်းနည်းမိရပါတယ်။ သူတို့ နေ့စဉ်ရှုရှိုက်နေရတဲ့ လေထု ကြီးက ဘယ်လိုပဲ အနံ့ယဉ်နေပါစေ ။သူတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘယ်လောက်တောင်များ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုက်နေကြမလဲရှင်?
အခုထက်ပိုပြီး လှူဒါန်းနိုင်ဖို့ ကျွန်မအများကြီး ကြိုးစားနေပါတယ်။ လိုအပ်သူများကို လိုအပ်ချိန်မှာ ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ လက်တစုံ အား အသက်ထက်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရပါစေဘုရား ” ဆိုပြီး ဝမ်းနည်းစွာပြောထားပါတယ်။
ခိုင်နှင်းဝေကတော့ အများအကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နေသလို သူမချစ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရီသတ်ကြီးကလည်း ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို စောင့်ကြည့်အားပေးကြပါဦးနော်။
မငျးသမီးခြောလေး ခိုငျနှငျးဝကေတော့ ခိုငျနှငျးဝပေရဟိတအသငျးကို တညျထောငျပွီး (၇)ရကျသားသမီးအလှူရှငျတှနေဲ့အတူတူ အလှူအတနျးတှကေို ပွုလုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ခိုငျနှငျးဝကေ လကျရှိမှာလညျး စားဝတျနရေေးခကျခဲကွပျတညျးနတေဲ့ အခွခေံလူတနျးစား
မိသားစုတှဆေီ ကိုယျတိုငျသှားရောကျပွီး လှူဒါနျးထောကျပံ့မှုတှကေို ပွုလုပျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ခိုငျနှငျးဝကေ အမှိုကျပုံရှမှေ့ာ တဲထိုးပွီး ရှငျသနျနထေိုငျရတဲ့သူတှကေို သှားရောကျ လှူဒါနျးခဲ့ပွီး သူမမွငျတှခေံ့စားရသမြှကို အခုလိုပဲပွောလာပါတယျ။
“ယနေ့ မွောကျဒဂုံ ထားဝယျခြောငျ အမှိုကျပုံအနီးရှိ ခြို့တဲ့သောသူမြားအား မီးဖိုခြောငျသုံး စားသောကျကုနျမြားနှငျ့ မိုးတှငျးအသုံးပွုရနျ ထီး ၊ ဦးထုပျနှငျ့ အကြီမြား အပွငျ ကလေးငယျမြားအတှကျ ကလေးအကြီမြားပါ သှားရောကျလှူဒါနျးခဲ့ပါတယျရှငျ
သှားလှူဒါနျးဖွဈတဲ့ အခြိနျ ခဏလေးမှာတောငျ အနံ့အသကျဆိုးတှကွေောငျ့ ကမြတို့တှအေသကျရှုကပျြနခေဲ့ရတာ တကယျတမျး အဲ့အမှိုကျပုံရှမှေ့ာ ရှကျဖငျြတဲလေးထိုးပွီး ရှငျသနျနထေိုငျရတဲ့ လူတှေ ဘယျလိုတှမြေား နထေိုငျနကွေရမလဲ”
“ကြှနျမ မစဉျးစားနိုငျလောကျအောငျ စိတျထဲ ဝမျးနညျးမိရပါတယျ။ သူတို့ နစေ့ဉျရှုရှိုကျနရေတဲ့ လထေု ကွီးက ဘယျလိုပဲ အနံ့ယဉျနပေါစေ ။သူတို့ ကနျြးမာရေးအတှကျ ဘယျလောကျတောငျမြား ဆိုးဆိုးဝါးဝါးထိခိုကျနကွေမလဲရှငျ?
အခုထကျပိုပွီး လှူဒါနျးနိုငျဖို့ ကြှနျမအမြားကွီး ကွိုးစားနပေါတယျ။ လိုအပျသူမြားကို လိုအပျခြိနျမှာ ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျတဲ့ လကျတစုံ အား အသကျထကျဆုံးပိုငျဆိုငျရပါစဘေုရား ” ဆိုပွီး ဝမျးနညျးစှာပွောထားပါတယျ။
ခိုငျနှငျးဝကေတော့ အမြားအကြိုးကို သယျပိုးဆောငျရှကျနသေလို သူမခဈြတဲ့ အနုပညာအလုပျတှကေိုလညျး ဆကျလကျလုပျကိုငျနိုငျဖို့ ကွိုးစားနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပရီသတျကွီးကလညျး ခိုငျနှငျးဝရေဲ့ အနုပညာလှုပျရှားမှုတှကေို စောငျ့ကွညျ့အားပေးကွပါဦးနျော။
အသည်းကင်ဆာ နောက်ဆုံး အဆင့်လူနာ အံ့အားသင့်ဖွယ် အရှင်းပျောက်ကင်းသွားစေသော ဆေးနည်းလမ်းကောင် ….
ဒီကောင်မလေးကိုရော သိကြလား ????